India: Injeniera novonoina tany Afghanistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2018 6:01 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana May 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Fampahatsiahivana mampihetsi-po tamin'ny fomba maha-saropady ny toe-draharaha ho an'ireo Indiana miasa ao amin'ity firenena ity ny famonoan'ny milisy Taliban tany Afghanistana an'ilay injeniera Indiana, Suryanarayana. Nangataka ny Indianina rehetra mba hiala any Afghanistan ny Taliban nandritra ny fe-potoana voafaritra raha toa ka hosoloina i Suryanarayana. Na izany aza, raha mbola tsy nanomboka akory ny fifanakalozan-kevitra dia efa novonoin'ny Taliban i Suryanarayana mialoha ny fiafaran'ny fe-potoana farany. Manana lahatsoratra momba ny fondamentalisma sy ny finoana i Dilip .
Ireo no lehilahy namono an'i Daniel Pearl tany Pakistana, Sanjoy Ghose tany Assam, Ken Saro-Wiwa tao Nizeria, Ehsan Jaffrey tany Ahmedabad, Rupin Katyal tao amin'ny IC-814, ny vadin'i Darshan Kaur Ram Singh tao Delhi, ny rain'ny namako Autar Kaw tao Kashmir, ajanoko eo ny lisitry ny voina. Jiolahimboto mpamono olona avokoa. Tsy misy resaka fivavahana momba azy ireo; ary raha toa ka tsy tafiditra amin'izany ny resaka fivavahana dia tsy misy tokony hanajantsika ny antony samihafa na ny antony sy ny tanjon'izy ireo .
Nametraka fanontaniana momba ny dingana manaraka sy ny toerana misy ny fandraisana andraikitra ataon'i India ny The Arbit Council . Naneho hevitra momba ny fiarovana ny asa sy nampahatsiahy ihany koa i Ashok, izay Indiana miasa any Afghanistana fa ity no Indiana faharoa namonoin'ny Taliban tao anatin'ny efa-bolana.
Mamerina indray ny loza ateraky ny fiasana ao amin'ny faritany manasaraka an'i Afghanistana-Pakistana toa an'i Kandahar, Qalat ary Zabul ireo tranga roa ireo. Tsy toy ny any Afghanistana Afovoany sy Avaratra izay hiasako, fa eo ambany fifehezan'ny fiteny Pashtu ary faritra hanjakan'ny Taliban ireo faritra atsimo ireo. Ireo no faritra izay na ny Afghana aza (izay miteny Farsi) dia matahotra ny mandeha eo. Famonoan-tena ny fanatontosana asa any amin'ireo faritra misy ny toe-tsain'ny ady ara-poko ireo raha tsy hoe angaha ao anaty toby miaramila na any amin'ny faritra sasany azo antoka no hiasana.
Mihevitra i Jagadish fa tsy azo raisina ho tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny tsirairay any Afghanistana ny governemanta Indiana satria mampidi-doza ny miasa any. Naneho hevitra momba ny mety mahatonga ny fitomboan'ny fandatsahan-dra ao India i Shoonya. Naneho hevitra momba ny ranomasom-boay avy amin'ny Indiana ny Indian Capitalist.
So much so that if an Indian faces a tragedy outside the country his plight becomes famous across India, but even if he suffers hell in the country, no one pays heed to his trauma. Thousands of Indians get murdered every year by sundry terrorists operating within the country and our generally verbose media never comes forward to televise live the plight of their families. Naxals kill tens of people every month.
Raha misy Indiana iray miatrika zava-doza any ivelan'ny firenena, dia lasa malaza manerana an'i India ny zava-tsarotra atrehiny, ary tsy misy olona mihaino ny adin-tsainy na dia mijaly mafy aza izy eto amin'ny firenena. Indiana an'arivony miasa ao amin'ny firenena no novonoin'ireo mpampihorohoro isankarazany isan-taona ary tsy mipoitra mba hitatitra mivantana ny toe-draharaha sarotra atrehahan'ny fianakaviany ny fampahalalam-baovao basivava amin'ny ankapobeny ireo. Mamono olona am-polony isam-bolana ny Naxals .
Nanome rohy mankany amin'ny bilaogy misy lahatsoratra momba ity olana ity ny Desipundit ary misy ny fifanakalozan-kevitra mahaliana ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra.